Global Voices teny Malagasy » Bolivia: resaka fitsaram-bahoaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Novambra 2008 20:43 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Bolivia, Lalàna, Teratany
Niteraka savorovoro nanerana an'i Bolivia manontolo ny firoboroboan'ny famonoana olona na fikasana hamono olona voampanga ho nandika lalàna tsy mandalo fitsarana. Nitranga tany amin'ny faritry Altiplano tao Achacachi  tamin'ny 17 novambra 2008 lasa teo ny tranga farany izay nalaza tamin'ny haino aman-jery [es] . Olona 11 lahy sy vavy no nampangain'ny mponina tao an-toerana anjatony ho nangalatra ka nosamborina sy nodorana velona. Maty ny roa tamin'ireo nampangaina ary henjana ihany koa ny hay nahazo ireo sivy ambiny na dia avotra aza ny ainy noho ny fidiran'ny Ben'ny tanàna sy ny mpitandro ny filaminana an-tsehatra.
Indrisy moa fa lasa karazan'ny fomba fanao mahazatra izay fihetsika izao noho ny fandefasana azy amin'ny fahitalavitra araka ny lazain'i  Renzo Colanzi [es]:
Hita amin'ny ora rehetra mandritra ny vaovao an-tsary ny fitsarana ataon'olona mampihatra famonoana olona ampangaina ho nandika lalàna tsy mandalo fitsarana ara-dalàna eto Bolivia. Tsy voaaro amin'ny fijerena sary manohina (noho ny herisetra) ny mpijery, hany ka na ny zazakely aza dia tsy voatandrina tsy hijery azy. Tahaka ny hoe efa nanangana karazana rindrina isika tsy ho taitra intsony mahita ireny toe-javatra mampihoro-koditra ireny. Nisy maty vokatr'izany toe-javatra izany ny polisy tany Cochabamba ary tsy nisy ny nosamborina noho ity raharaha ity. Nisy toy izany koa tany Montero ary mitovy tahaka izany avokoa manerana ny faritra rehetra manerana ny firenena.
Raikitra ny adihevitra raha azo sokajiana ho fampiharana ny fitsaram-bahoaka ireny famonoana olona voampanga ireny raha toa vao nanameloka ny zava-nitranga tany Achacachi ny fitondrana. Nambarany ary fa tsy tarazon'ny teratany eo amin'ny sehatry ny fitsaram-bahoaka velively ny manala ain'olonkafa. Etsy ankilany anefa lazain'ny mponina ao an-toerana fa tsy dia itokisany loatra ny “fitsarana mahazatra” ka tsy maintsy raisin-dry zareo ny andraikitra fa raha tsy izany dia hitohy hatrany ny asa ratsy. Ny mampiahiahy ihany koa dia ny hanekena ny “fitsaram-bahoaka” ho anisan'ny rafitry ny fitsarana bôliviana amin'ny volavolan-dalam-panorenanana izay hanaovana fitsapa-kevi-bahoaka amin'ny 25 janoary 2009 ho avy izao hampiroborobo kokoa ny famonoana ny voampanga izay ho lasa ara-dalàna.
Tezeran'i Erika Pinto [es] ho tompon'andraikitra  ny famonoana olona tsy voatsara ara-dalàna izao ny goverinemanta:
Satria noleferin'ny filoha Morales ny habibiana, dia avy ry zareo handoro vehivavy bevohoka, Niandry kendry tohina izy ireo ka noraotiny ho eny an-kianja avy eo ny olona 11 heverina ho mpangalatra. Samy mahita isika amin'ny sary fa olona tsy ampy fivelomana, vehivavy no maro ary ny beantitra no mandray ny toeran'ny mpitsara.
Manome zo antsika hamono azy ireo koa ve ny nataon'ny “ponchos rojos” (mpikambana milisy any Achacachi) nahavita habibiana?
Sa ho amin'ny tondrozotra iray ihany no iasan'ny “lalàna vaovao”?
Efa nifanekena fa hitondra antsika ho any amin'ny taonjato vaovaon'ny fandrosoana ity goverinemanta ity, saingy toa mizotra ho any amin'ny habibiana izaitratra izy izany.
Nampahatsiahivin'i Mario Duràn kosa ny nolazain'ny mpanao gazety iray fa tsy olona tsy manantsiny  ireo voampanga ireo. [es]
Na izany aza araka ny nolazain'ny mpanao gazety Amalia Pando avy ao amin'ny Erbol dia tsy anjely tsy akory ireo olona nosamborina tany Achacachi ireo fa efa maloto dosie anyamin'ny polisy ihany koa… manomboka amin'ny fangalarana mandalo ny fandrobana izany ary tonga hatramin'ny famonoana olona mihitsy aza.
Na izany aza, raha melohina ny manao fitsarana tena, dia tokony homelohina ihany koa ny rafitra ara-toe-karena miteraka firoboroboan'ny fanaovana asa-ratsy.
Maro amin'ny vondrona teratany no miezaka miaro ny laza tsaran'ny “fitsaram-bahoaka”. Avy amin'ny alalan'ny bolongana El Alto Noticias [es]  no niresadresahan'i Nelson Vilca [es]  tamin'ny mpikambana iray ao amin'ny vondron'ny teratany Guarayo, izay mametraka fa tsy midika “fanalana ain'olona hafa” velively ny “Fitsaram-bahoaka” (toy ny dina raha ny aty amintsika eto Madagasikara).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/11/21/1382/
 tranga farany izay nalaza tamin'ny haino aman-jery [es]: http://www.lagaceta.com.ar/vernota.asp?id_nota=300930
 tsy olona tsy manantsiny: http://bolivianueva.blogspot.com/2008/11/achacachi-opiniones-encontradaas.html
 El Alto Noticias [es]: http://elaltonoticias.blogspot.com/2008/11/justicia-comunitaria-sin-sangre-en-la.html
 Nelson Vilca [es]: http://revistalamalapalabra.blogspot.com/